Blockchain Izindaba 24.05.2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 24.05.2018
stock exchange-German njengesibopho yokuqalisa Bitcoin imikhiqizo
German Boerse, umnikazi we-Frankfurt Stock Exchange, Ucabangela ngemikhiqizo cryptocurrency, ngokusho kombiko.
Ukukhuluma emcimbini umkhakha eLondon ngoLwesithathu, Jeffrey Tessler, ikhanda le nkampani amaklayenti, imikhiqizo kanye nezimakethe core wathi:
“Singabantu ezijulile emsebenzini nalo.”
US iqala uphenyo ngokungemthetho intengo Bitcoin zokukhwabanisa
UMnyango Wezobulungiswa ivule uphenyo ukuhweba obungemthetho, ngokuqondile ukuthi abahwebi nobulelesi aphethe intengo Bitcoin, ngokuvumelana abantu abane ujwayelene ndaba.
abashushisi Federal abasebenza nge Lezimpahla Futures Ukuhweba Commission, somthetho zezimali eyengamela nemikhiqizo kuboshelwe Bitcoin.
Amaqhinga obungemthetho ukuthi uMnyango Wezobulungiswa igxile zihlanganisa ubuqili kanye ukugeza zokuhweba, okuyizinto yezenzo ezingemthetho ezingaba nomthelela amanani. Ngo ubuqili, abadayisi uhambisa oda bese usula kubo kanye namanani ukuhambisa ngendlela oyifunayo.
Geza abathengisa ukubandakanya ukuhweba okopelayo nokuzinyeza yabo kunika umcondvo bamanga emakethe ukufuna ukuthi ukhanga nezinye ukuba ngena kakhulu.
Lezi izinhlobo ukukopela ukuthi nabalawuli baye ichithe iminyaka emithathu izama sikhiphe ikusasa futhi emalini izimakethe.
yasebhange Thai uqeda kuthenga ngamazwe usebenzisa blockchain
Thailand Krungsri yasebhange ngempumelelo kwenziwa ukuthengiselana cross-border “indaba imizuzwana” ebhange e Singapore usebenzisa blockchain.
Ukusebenzisa le technology esikhathini esizayo kuzovumela yasebhange Singapore, Mitsubishi, futhi mhlawumbe nezinye izinkampani “sithuthukise zezimali nokuphathwa yayo ukusebenza kahle futhi kuncishiswe izindleko zabo” ibhange wathi.
Okokuqala mfihlo uthango Isikhwama umkhankaso e-Australia
Njalo Capital lase-Australia usethule lokuqala cryptocurrency-igxile uthango Isikhwama wezwe zimali okudayisa.
Tom Surman, wabasunguli kanye nomqondisi we-Australia yenkampani ukuphathwa utshalomali, wathi:
“Sesikhathele siziqhenye ngokuba omunye izimali zokuqala okudayisa ezenza cryptocurrency nobuchwepheshe blockchain etholakalayo njengendlela yokutshala imali cutting edge ngoba zonke Australia. "
Ngokusho Surman, kuyilapho abaningi base-Australia ufuna ukutshala cryptocurrencies, ukuntuleka technical kokuxazulula elivimbela iningi lazo livela diving phakathi digital lwemali amanzi.
tech Japanese GMO giant ukuthi unikezele ngezinsizakalo 7nm Bitcoin emayini
Japanese IT giant GMO Inthanethi isethwe ukuthi unikezele ngezinsizakalo a idivayisi Bitcoin yezimayini esekelwe chips 7nm ngasekupheleni kwalo nyaka.
I eqinile wathi it is kokuqala emayini entsha B2 ngoJuni 6 nge ekukhiqizweni ukuba maduze ukulandela, futhi izimpahla kusukela ngo-October.
Isimemezelo wathi idivayisi kufanele ahlinzeke ephezulu amazinga kwamandla hashing nge aphansi izimfuno ugesi.
Coinbase ozuza mfihlo exchange Paradex & uhlela ukunikeza amasevisi ngaphandle US
Coinbase, kwekulu platform mfihlo exchange e-US, has atholwe exchange endlalekile platform Paradex.
Paradex kuyinto peer-to-peer ekunikeza abasebenzisi ikhono ukudayisa cryptos ngokuqondile wallets zabo kunokuthi usebenzise amasevisi eyodwa efana Coinbase, Gemini, njll. Ngakho, abasebenzisi zinamalungelo agcwele umnakekeli phezu amathokheni wawo futhi Fiat inhlokodolobha.
Coinbase uhlela ukwenza ezinye nezithuthukisi ubuchwepheshe kanye ukuqalisa amasevisi Paradex sika kumakhasimende ngaphandle kwe-United States.
Evelele Czech inkampani amandla ukwamukela Bitcoin izinkokhelo
Enye yezinkampani ezinkulu igesi yemvelo e-Czech Republic, ePrague igesi, umemezele izinhlelo ukwamukela Bitcoin ngenyanga ezayo.
Inkampani amandla inkampani kuphela umkhakha ukuthatha leso sinyathelo.
Okwamanje, EPrague negesi ugesi izimpahla Ngaphezu 420,000 amakhasimende igesi.
Crypto Izindaba 20.10.2018
Crypto Izindaba 22.10.2018
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 23.05.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 25.05.2018